Ngo-1984 'iya kuba liXesha elifutshane le-AHS-iHorror
Ikhaya Iindaba ezothusayo zoLonwabo Ngo-1984 'iya kuba liXesha elifutshane le-AHS
Ngo-1984 'iya kuba liXesha elifutshane le-AHS
by UTimothy Rawles Oktobha 31, 2019
ibhalwe ngu UTimothy Rawles Oktobha 31, 2019
Abanye banokuyithanda, abanye basenokungayithandi, kodwa AHS: 1984 izakuba nesiphelo sayo sexesha ngoNovemba 14, isenza ukuba elona xesha lifutshane kuthotho ukuza kuthi ga ngoku.
1984 Ingaba i Ingcamango engaqhelekanga ukususela ngoku Roanoke, Abanye bade bacebise ukuba lo nyaka ujikeleze kukuba yonke le nto iyinyani yeVHS.
Ngoku lixesha lesithoba, 1984 iqala njengokuphosa emva kwi-slashers yeshumi leminyaka le-neon, kungekho namnye, kodwa Mbini Ababulali abalandela abacebisi beenkampu ngasemahlathini kwindawo endala yokulahla ikampu ecwangciselwe ukuphinda ivule abantwana ngosuku olulandelayo.
Njengoko kulindelwe ngohlobo lwe-boilerplates, abacebisi bathathwa nganye nganye ngeendlela ezahlukeneyo, nganye inegazi elininzi kangangoko.
Iifani zahlulwe kuba uninzi lweemveliso zikaMurphy, izinto azisoloko zibonakala kwaye ayicacanga ukuba ngoobani ababulali bokwenyani, bejika uthotho kuzo zonke iintlobo zemikhombandlela.
Ngokufutshane, ababukeli abafuna iimpendulo kuya kufuneka balinde iiveki ezimbalwa.
Ngokumataniswa, Indlu yokubulala ndineziqendu ezili-12, Ukholo ndineziqendu ezili-13, Coven ndineziqendu ezili-13, Freakshow ndineziqendu ezili-13, ihotele ndineziqendu ezili-12, Roanoke ndineziqendu ezili-10, Inkolo ineziqendu ezili-11, kwaye Apocalypse ndineziqendu ezili-10.
Nangona abanye abadlali abaphambili bengekho kule sizini: uKathy Bates, uSarah Paulson, uLady Gaga, inika abanye ithuba lokuqaqamba kwiindawo zabo. Inqaku elikhethekileyo kufuneka liye kuGus Kenworthy kwaye Posa Angelica Ross.
Ibali laseMelika laseHoror liza ngoLwesine nge-10 ngokuhlwa kwi-FOX. Cofa apha Ezinye iinkcukacha.
AHS: 1984Ibali laseMerika elibuhlunguRyan MurphyUTimothy Rawles
U-Lupita Nyong'o utyelele kwakhona umlinganiswa ovela e-'US 'kwaye woyikisa i-Heck Out ye' Halloween Horror Nights '
Jonga iTrailer yoLungiso lukaNetflix luka'Witcher '